Kudiwa kwekufamba nendege pasi rose kunodzoka zvine mwero munaGunyana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Kudiwa kwekufamba nendege pasi rose kunodzoka zvine mwero munaGunyana
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Willie Walsh, Mutungamiriri Mukuru weIATA.
Ikozvino shanduko yemutemo weUS kuvhurazve kufamba kubva kumisika makumi matatu nenhatu yevatorwa vakabayiwa zvizere kubva 33 Mbudzi inogamuchirwa, kana yanonoka, budiriro. Pamwe chete nekuvhurwa kwechangobva kuitika mune mamwe misika yakakosha seAustralia, Argentina, Thailand, neSingapore izvi zvinofanirwa kupa kusimudzira kudzoreredzwa kukuru kwerusununguko rwekufamba.
Kudiwa kwese kwekufamba nendege munaGunyana 2021 (kuyerwa mumari yevatakuri makiromita kana maRPK) kwaive kwakadzikira ne53.4% ​​zvichienzaniswa naGunyana 2019. Izvi zvakaratidza kusimuka kubva muna Nyamavhuvhu, apo kudiwa kwaive 56.0% pazasi Nyamavhuvhu 2019 mazinga.
Misika yemumba yaive yakadzikira 24.3% kana ichienzaniswa naGunyana 2019, shanduko huru kubva Nyamavhuvhu 2021, apo traffic yaive yakadzikira 32.6% makore maviri apfuura. Misika yese yakaratidza kuvandudzwa kunze kweJapan neRussia, kunyangwe iyo yekupedzisira yakaramba iri munzvimbo yakasimba yekukura kana ichienzaniswa ne2019.
Kudiwa kwevatyairi vepasirese munaGunyana kwaive 69.2% pazasi Gunyana 2019, zvakaipisisa kupfuura kuderera kwe68.7% kwakanyorwa muna Nyamavhuvhu.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) yakazivisa kudzokororwa kuri pakati nepakati mukufamba nendege munaGunyana 2021 zvichienzaniswa nekuita kwaNyamavhuvhu. Izvi zvakafambiswa nekupora mumisika yemumba, kunyanya China, uko dzimwe nzira dzekufamba dzakasimudzwa zvichitevera kubuda kweCCIDID-19 muna Nyamavhuvhu. Zvichakadaro, kudiwa kwenyika dzese kwakatsvedza zvishoma zvichienzaniswa nemwedzi wapfuura.
Nekuti kuenzanisa pakati pa2021 na2020 mhedzisiro yemwedzi nemwedzi yakakanganiswa nekukatyamadza kwekuita kweCCIDID-19, kunze kwekunge zvacherechedzwa neimwe nzira kuenzanisa kuri kwaGunyana 2019, iyo yakatevera yakajairika yekuda maitiro.
"Kuita kwaGunyana ibudiriro yakanaka asi kupora mumigwagwa yepasirese kunoramba kwakamira pakati pekuvharwa kwemuganho uye kuvharirwa. Ikozvino shanduko yemutemo weUS kuvhurazve kufamba kubva kumisika makumi matatu nenhatu yevatorwa vakabayiwa zvizere kubva 33 Mbudzi inogamuchirwa, kana yanonoka, budiriro. Pamwe chete nekuvhurwa kuchangobva kuitika mune mamwe misika yakakosha seAustralia, Argentina, Thailand, neSingapore izvi zvinofanirwa kupa kusimudzira kudzoreredzwa kukuru kwerusununguko rwekufamba, "akadaro. Willie Walsh, Director General weIATA.
International Passenger Misika
Vatakuri veEuropean Kufamba kwepasirese kwaGunyana kwakadzikira 56.9% kana Gunyana 2019, zvichidzika nechikamu chimwe muzana kana zvichienzaniswa nekudzikira kwe1% muna Nyamavhuvhu zvichienzaniswa nemwedzi iwoyo muna 55.9.
Ndege dzeAsia-Pacific vakaona traffic yavo yepasi rose yaGunyana ichidonha 93.2% zvichienzaniswa naGunyana 2019, isina kushanduka kubva pakudonha kwe93.4% yakanyoreswa muna Nyamavhuvhu 2021 maringe naNyamavhuvhu 2019 sezvo dunhu richiramba riine matanho akasimba ekudzora muganho. Kugona kwakadzikira 85.2% uye mutoro wezvinhu wakaderera ne42.3 muzana kusvika 36.2%, zviri nyore kuderera pakati pematunhu.
Ndege dzekuMiddle East yakave nekudonha kwe67.1% munaGunyana zvichienzaniswa naGunyana 2019, yakavandudzwa zvishoma pamusoro pekudzikira kwe68.9% muna Nyamavhuvhu, zvichienzaniswa nemwedzi iwoyo muna 2019.
Vatakuri vekuNorth America vakawana kudonha kwe61.0% kwemotokari munaGunyana maringe nemwaka wa2019, zvakati nani pakudzikira kwe59.3% muna Nyamavhuvhu zvichienzaniswa naNyamavhuvhu 2019. Kugona kwakadzikira 47.6%, uye mutoro wakaderera ne21.3 percent kusvika 61.9%.
Ndege dzeLatin America yakaona kudonha kwe61.3% munaSeptember traffic, zvichienzaniswa nemwedzi mumwe chete muna 2019, kukwira pamusoro pekuderera kwe62.6% muna Nyamavhuvhu zvichienzaniswa naNyamavhuvhu 2019. Gunyana remvura rakadonha 55.6% uye mutoro wechinhu wakaderera 10.7 muzana kusvika 72.0%, yaive iyo yakanyanya kuremerwa chinhu pakati pematunhu emwedzi wechigumi nembiri wakateedzana.
Ndege dzemuAfrica ' traffic akadonha 62.2% muna September maringe makore maviri 'apfuura, anenge 4 muzana mapoinzi yakaipisisa kupfuura 58.5% kuderera August zvichienzaniswa August 2019. September simba akanga pasi 49.3% uye mutoro chinhu yakaderera 18.4 muzana pfungwa kuti 53.7%.
Dzimba dzeVapfuuri Vemisika
Gunyana 2021 (% chg vs mwedzi mumwe chete muna 2019)
Mugove wepasi rose
Ositireriya 0.7% -80.3% -71.2% -26.2% 56.2%
Bhuraziri 1.6% -17.3% -16.8% -0.5% 81.2%
Brazil musika wemumba wakaramba uchipora zvishoma nezvishoma pakati pekufambira mberi kwekudzivirira. Traffic yaive yakadzikira 17.3% zvichienzaniswa naGunyana 2019 - yakavandudzwa kubva pakudonha kwe20.7% muna Nyamavhuvhu.
Japan Kufamba kwemumba kwaGunyana kwaive kwadzikira 65.5%, yakawedzera kubva pakudzikira kwe59.2% muna Nyamavhuvhu zvichienzaniswa naNyamavhuvhu 2019, nekuda kwekukanganisa kwezvirambidzo.
“Chiziviso chega chega chekuvhurazve chinoita sechinouya nemitemo yakafanana asi yakasiyana. Isu hatigone kurega kupora kuchidzika mumatambudziko. The ICAO High Level Musangano weCOVID-19 wakabvumirana kuti kuwirirana kunofanirwa kuve chinhu chekutanga. Iyo G20 yakazivisa kuzvipira kutora danho rekutsigira kupora nekufamba kusina musono, kuenderera mberi, uye digitalization. Iye zvino hurumende dzinofanirwa kuisa zviito kuseri kwemazwi aya kuti vaone matanho ari nyore uye anoshanda. Vanhu, mabasa, vemabhizimisi nehupfumi vari kutarisira budiriro chaiyo,” vakadaro Walsh.
Chiono cheIATA chekumisazve kubatana kwepasirese zvakachengeteka chakavakirwa pamisimboti mishanu yakakosha:
Majekiseni anofanira kuwanikwa kune vese nekukasira.
Vafambi vakabaiwa jekiseni havafanirwe kusangana nezvipingamupinyi zvekufamba.
Kuedzwa kunofanira kugonesa avo vasina kuwana majekiseni kuti vafambe vasina kupatsanurwa.
Antigen bvunzo ndiyo kiyi kune isingadhuri uye iri nyore kuyedza hurumende.
Hurumende dzinofanirwa kubhadhara kuyedzwa, saka hazviite chinodzivirira hupfumi kufamba.